घरको फो’हो’रबाट कौसी खेती एसरी गर्छिन भगवती हेर्नुहोस् भिडियो सहित!:: Mero Desh
Published on: १९ भाद्र २०७८, शनिबार १०:४७
ग्रामीण क्षेत्रदेखी शहरी क्षेत्रमा तिब्रगतिमा बसाइँसराइ भएको कारण शहरी क्षेत्रमा जग्ग जमिन सा’गुरिदै गएको छ। जमीन साँगुरिदै गएपछी दैनिक खपत तरकारी उब्जाउ कम हुन गएको हो। जमिन नभएपछी दैनिक रुपमा खपत गरिने तरकारी कौशिमा फलाएको देख्न सकिन्छ ।”
कौशीमा’ तरकारी खेती गरेर घरको फो’होर सदुपयोग गर्दै आएकी स्वयम्भू निवासी भगवती श्रेष्ठले कौशिमै विभिन्न किसिमको तरकारी फलाउछिन । उनले ६० साल देखि कौसिमा तरकारी खेती गर्दै आएको बताइन्। उनले कौसी खेती गर्न सुरु गरेपछी बजारमा गएर सब्जी किन्न नपरेको बताउछिन।
श्रेष्ठ को कौसी खे ती हे र्न आसपासका ठाउँबाट आउने गृहिणीहरुको घु’इचो लाग्ने गर्दछन्,, । पछिल्लो समय सरकारले कौसी खेतिलाइ बढुवा प नि दिएको छ। गत साल कौसि क्विन” प्रतियोगितामा प्रथम भएपछी झन उनलाइ कौसी खेतिले उत्प्रेरित गरेको बताउछिन्। सक्दा र भ्याउदा आफ्नै कौसिमा अर्गानिक
तरकारी फलाएर खाऔ र स्वस्थ्य रहौँ भनेर उनले उनी जस्तै अन्य गृहिणीलाई सन्देश समेत दिइन्। उनको कौसी खेतिमा सिजन अनुसार टमाटर , भेन्टा , फर्सी, कर्कलो, सिमि , खुर्सानी देखि लिएर अन्य थुप्रै फलफुल पनि फलाउने गरेको बताइन्। पूरा समाचार तलको भिडियो हेर्नुहोस्!!!